Akụkọ - Obere ihe omuma banyere ngwaahịa nke igwe na-ekpo oku na ịpị isostatic na-ekpo ọkụ
Obere ihe omuma banyere ngwaahịa nke igwe oku di oku na ịpinye isostatic di oku
Maka ịpị ọkụ, a na-eji usoro nhazi nke nrụgide na ọnọdụ okpomọkụ eme ihe. Mgbe mgbe, a na-etinye nrụgide ahụ mgbe ụfọdụ ihe ọkụkụ emeela n'ihi na itinye nrụgide na obere okpomọkụ nwere ike ịnwe mmetụta na-adịghị mma na akụkụ na ngwa ọrụ. Igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ dị ọtụtụ narị ogo dị ala karịa okpomọkụ na-agbanwe agbanwe. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmezu zuru oke na-apụta ngwa ngwa. Ọsọ nke usoro yana obere okpomọkụ chọrọ ka ọ ghara igbochi oke ọka.
Usoro yiri ya, nsị plasma nsị (SPS), na-enye ụzọ ọzọ na usoro mwepụ na mpụga nke ikpo ọkụ. Na SPS, ihe nlere, nke a na-ahụkarị ntụ ma ọ bụ akụkụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ precompacted, na-ebuba na graafụ na-anwụ anwụ na graphite punches n'ime ụlọ agụụ na a na-etinye pulsed DC ugbu a gafee ntụpọ, dị ka egosiri na Ọgụgụ 5.35b, ebe a na-etinye nrụgide. Ugbu a na-akpata Joule kpo oku, nke na-ebuli ọnọdụ okpomọkụ nke ihe nlereanya ahụ ngwa ngwa. A kwenyere na nke ugbu a na-ebute nhazi nke plasma ma ọ bụ ihe na-agbapụta ọkụ na oghere dị n'etiti ihe dị iche iche, nke nwere mmetụta nke nhicha ihe ntanetị na imezi nsị. Usoro plasma siri ike inyocha nnwale wee bụrụ isiokwu a na-arụrịta ụka. E gosipụtara usoro SPS dị oke irè maka ịgbatị ọtụtụ ihe dị iche iche, gụnyere ọla na ceramik. Densification na-eme na ala dị ala ma mechaa ngwa ngwa karịa ụzọ ndị ọzọ, na-ebutekarị ezigbo microstructures ọka.
Hot Isostatic Pressing (HIP). Hot isostatic ịpị bụ imekotaotuugbo ngwa nke okpomọkụ na hydrostatic mgbali kọmpat na jupụta a ntụ ntụ kọmpat ma ọ bụ akụkụ. Usoro a yiri nke oyi na isostatic na ịpị, ma na elu okpomọkụ na a gas na-ebufe nsogbu na akụkụ. Ajọ gas dị ka argon bụ ihe a na-ahụkarị. A na-ebu ntụ ntụ na-abawanye n'ime akpa ma ọ bụ nwere ike, nke na-arụ ọrụ dịka ihe mgbochi nrụrụ n'etiti gas na-arụ ọrụ na akụkụ ahụ. N'aka nke ọzọ, akụkụ nke etinyere ma debe ya ruo n'ókè nke mmechi pore nwere ike ịbanye na usoro "akpa". A na-eji HIP iji nweta oke zuru oke na ntụ ntụ. na seramiiki nhazi, yana ụfọdụ ngwa na densification nke oge ọgbụgba. Usoro a dị ezigbo mkpa maka ike ịmewanye ihe, dị ka alloys na-ajụ, superalloys, na nonoxide ceramics.
Ngwunye na teknụzụ encapsulation dị mkpa maka usoro HIP. A na-eji ihe ndị dị mfe, dị ka ite ọla, dị ka njupụta nke ngwakọta alloy. A na-eji ụdị ihe mgbagwoju anya emepụta ihe na-egosipụta akụkụ ikpeazụ nke geometries. A na - ahọrọ ihe ngwongwo ka ọ bụrụ nke na - ehi ụra ma na - agbarụ n'okpuru ọnọdụ nrụgide na ọnọdụ okpomọkụ nke usoro HIP. Ihe akụrụngwa ekwesịghị ịbụ ihe na-adịghị arụ ọrụ na ntụ ntụ ma dịkwa mfe iwepu. Maka ntụ ntụ ntụ, a na-ahụkarị arịa ndị e ji ígwè rụọ. Nhọrọ ndị ọzọ gụnyere iko na ihe ndị nwere porous nke agbakwunyere na nke abụọ. Igwe encapsulation nke ntụ ntụ na akụkụ preformed bụ ihe a na-ahụkarị na usoro seramiiki HIP. Ijuputa na ikpochapu nke ihe bu ihe di nkpa nke na-achokariri ihe puru iche na akpa ya. Processesfọdụ usoro mmepụpụ na-ewere ọnọdụ na okpomọkụ dị elu.
Ihe ndị dị mkpa nke usoro maka HIP bụ arịa nrụgide na ndị na-ekpo ọkụ, nrụpụta gas na inyefe akụrụngwa, na ijikwa elektrọnik. Ọgụgụ 5.36 na-egosi ihe atụ schematic nke a HIP setịpụrụ. E nwere ụzọ abụọ dị mkpa eji arụ ọrụ maka usoro HIP. Na ọnọdụ nkwụnye ọkụ, a na-ebufe akpa ahụ n'èzí ụgbọ mmiri nrụgide wee kwadoo ya, kpoo ya na ọnọdụ okpomọkụ achọrọ ma pịa ya. Na ọnọdụ nkwụnye oyi, a na-etinye akpa ahụ n'ime arịa nrụgide na ụlọ okpomọkụ; mgbe ahụ kpo oku na nrụgide na-amalite. Nrụgide dị n'etiti 20-300 MPa na ọnọdụ okpomọkụ dị na 500-2000 Celsius C bụ ihe nkịtị.